Asɔfo no ankyerɛkyerɛ ɔmanfo no (1-9)
Ɛsɛ sɛ ɔsɔfo ano bɔ nimdeɛ ho ban (7)
Nkurɔfo no fa kwammɔne so gyaa aware (10-17)
‘“Mikyi awaregyae,” Yehowa asɛm ni’ (16)
2 “Afei mo, asɔfo, nea mereka akyerɛ mo ni.+ 2 Sɛ moantie na moamma anna mo koma so sɛ mobɛhyɛ me din anuonyam a, ɛnde mɛma nnome aba mo so,+ na mɛma mo nhyira adan nnome.+ Nea ɛwom mpo ne sɛ, mama mo nhyira adan nnome dedaw, efisɛ moamma anna mo koma so,” asafo Yehowa asɛm ni. 3 “Hwɛ! Mo nti mɛsɛe aba a moagu no,*+ na mɛbɔ tiafi apete mo anim, mo afahyɛ tiafi no. Na wɔbɛsoa mo akɔ hɔ.* 4 Afei mubehu sɛ me na mede ahyɛde yi ama mo, sɛnea ɛbɛyɛ a apam a me ne Lewi ayɛ no begyina daa,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 5 “Apam a me ne no yɛe no, ɛma onyaa nkwa ne asomdwoe, sɛnea ɛbɛyɛ a obesuro me.* Osuroo me, ampa, onyaa obu kɛse maa me din. 6 Ná nokware mmara* wɔ n’anom,+ na wamfa n’ano anka biribiara a ɛnteɛ. Ɔne me nantewee asomdwoe ne trenee mu,+ na ɔmaa nnipa pii twee wɔn ho fii bɔne ho. 7 Efisɛ ɛsɛ sɛ ɔsɔfo ano bɔ nimdeɛ ho ban, na nnipa hwehwɛ mmara* fi n’anom.+ Nea enti a ɛte saa ne sɛ, ɔyɛ asafo Yehowa somafo. 8 “Nanso mo de, moaman afi ɔkwan no so. Moama mmara* no ato nnipa pii hintidua.+ Moasɛe Lewi apam no,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 9 “Eyi nti, me nso mɛma mo anim agu ase na mabrɛ mo ase wɔ nnipa nyinaa anim, efisɛ moamfa m’akwan so, na moyɛɛ animhwɛ wɔ asɛnni mu.”+ 10 “Ɛnyɛ agya baako na yɛn nyinaa wɔ?+ Ɛnyɛ Onyankopɔn baako no ara na ɔbɔɔ yɛn? Ɛnde adɛn nti na yɛn mu biara twa ne yɔnko nkontompo+ de gu yɛn agyanom apam ho fĩ? 11 Yuda atwa nkontompo, na akyiwade bi akɔ so wɔ Israel ne Yerusalem. Efisɛ Yehowa kronkronyɛ* a Onni ho agoru no, Yuda agu ho fĩ,+ na wakɔware ananafo nyame bi babea.+ 12 Obiara a ɔbɛyɛ saa no, sɛ ɔyɛ hena oo, sɛ ɔyɛ hena oo,* sɛ ɔde akyɛde afɔre brɛ asafo Yehowa mpo a, Yehowa bekum no* afi Yakob ntamadan mu.”+ 13 “Ade foforo* bi nso wɔ hɔ a moyɛ. Ama nisu ne osũ ne ahomegu akata Yehowa afɔremuka no so. Enti ɔnhwɛ mo akyɛde afɔre bio, na mo nsam biribiara nni hɔ a n’ani gye ho.+ 14 Na mubisa sɛ, ‘Adɛn ntia?’ Ɛne sɛ, Yehowa na ɔyɛ ɔdansefo wɔ wo ne ɔbea a wowaree no wo mmeranteberem no ntam, wo yere a woatwa no nkontompo no. Nanso ɔno na ɔyɛ wo hokafo ne wo yere a wo ne no yɛɛ apam.*+ 15 Nanso obi wɔ hɔ a wanyɛ saa, efisɛ na ɔwɔ honhom a aka no bi. Ɛdɛn na na onii no rehwehwɛ? Onyankopɔn aseni.* Enti monhwɛ mo suban yiye, na munntwa mmea a mowaree wɔn mo mmeranteberem no nkontompo. 16 Efisɛ mikyi* awaregyae,”+ Israel Nyankopɔn Yehowa asɛm ni. “Na mikyi nea ɔde awudisɛm ayɛ n’ataade,”* asafo Yehowa asɛm ni. “Monhwɛ mo suban yiye, na munntwa nkontompo.+ 17 “Mode mo nsɛm ahyɛ Yehowa brɛ.+ Nanso mubisa sɛ, ‘Ɛdɛn na yɛayɛ de ahyɛ no brɛ?’ Ɛne sɛ, moka sɛ: ‘Obiara a ɔyɛ bɔne no teɛ wɔ Yehowa ani so, na n’ani gye wɔn a wɔte saa ho,’+ na moka nso sɛ, ‘Atɛntrenee Nyankopɔn no wɔ he?’”
^ Nt., “metwiw aba a moagu no anim.”
^ Kyerɛ sɛ, wɔbɛsoa wɔn akɔ baabi a wɔtow mmoa a wɔde wɔn bɔ afɔre tiafi gu no.
^ Anaa “obebu me; obedi me ni.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “tenabea kronkron.”
^ Nt., “nea wanyan ne nea ɔma mmuae.”
^ Anaa “betwa no.”
^ Nt., “Ade a ɛto so abien.”
^ Anaa “wo yere a wowaree no mmara kwan so.”
^ Nt., “okyi.”
^ Nt., “nea ɔde awudisɛm kata n’ataade so.” Anaa “nea odi awu.”